Kulesi sihloko, sizokutshela ukuthi ungabonisa kanjani izibonakaliso zangaphandle zokuba khona kwenkosikazi yomyeni wakho.
Ukushintsha oshade naye
Uma nje umuntu eqala ukushintsha, owesifazane uzizwa ngenxa yendalo yakhe yangaphakathi, kodwa aze aqaphele ukuthi ngabe kunjalo yini. Into yinto ethi intombazane ifunde kahle kahle. Futhi ikhono lokubona izinguquko ezincane emicabangweni nezenzo nazo zizenza uzizwe. Lezi zinkinga cishe azikho emadodeni. Futhi uma owesifazane eqala ukumuguqula, cishe akunakwenzeka ukwazi ngakho, uma umfazi ngokwakhe enganikezi insizakalo efanele.
Hhayi ngaso sonke isikhathi ukucabanga komfazi kuqinisekiswa. Ngokuvamile ekuziphatheni komyeni wakhe kukhona izinguquko ngenxa yenkathazo enzima emsebenzini, okungafuni ukuyikhuluma ekhaya. Ngokuvamile kunezimo eziphambene nazo, uma owesifazane ethembela kumlingani wakhe, ekuphenduleni kokugcina, ufunda ngalokho bonke omakhelwane abashoyo ngokuthula. Uyazi kanjani ukuthi indoda inenkosikazi? Kunezibonakaliso ezithile ezicacile kulokhu, esizozichaza ngokuningiliziwe ngezansi.
Ciza ushintsho lwemodi yosuku kumyeni
Okokuqala, kubalulekile ukuthola ukuthi ngabe umyeni ushintshe umbuso wosuku. Uma kunjalo, kwashintsha kanjani, futhi, eqinisweni, kuhlobene. Kunezinketho ezimbili:
Oshade naye, iqiniso, waqala ukusebenza ngaphezulu, ukuthola imali, isibonelo, ukulungiswa.
Umyeni wami waqala ukushintsha.
Ngeshwa, ukhetho lwesibili luvame kakhulu kunelokuqala.
Akuyona imfihlo okudingeka usebenzise isikhathi samahhala ngesithando esisha, okusho into eyodwa: uma indoda inenkosikazi, izobuya ekhaya kamuva. Yiqiniso, uma "uthando" lwakhe lungasebenzi naye ehhovisi elifanayo. Njengoba kulesi simo umyeni angakwazi ukwaneliseka ngempela emsebenzini futhi abuyele ekhaya kusihlwa, njengokungathi akukho okwenzekile.
Unkosikazi kufanele uchithe isikhathi, ukhulume naye, ube nobulili. Futhi isikhathi sokwakheka kwakhe kuyadingeka okungaphezu kwemizuzu engu-15. Ngakho-ke, uma uzwa ngezikhathi ezithile kusuka kumyeni wakho izizathu ezilandelayo: "imoto noma ibhasi ihlehlile", "Ngizohlala ubusuku nomngane" noma "ngihlale emsebenzini", kufanele uqaphele.
Umyeni wami ohambweni lwebhizinisi waqala ukuvakashela kaningi
Uma umyeni wakho engazange aqale ukuhamba ngebhizinisi (nangaphambili lokhu akuzange kubonwe ngaye), cabanga ngakho kahle. Ngokuqinisekile umyeni wakho wayenkosikazi. Futhi uma uhambo lube luhlala isikhathi eside, ke uqaphele nakakhulu. Umyeni ohambweni lwebhizinisi akabibi futhi akubhalele? Maye, konke kucacile - isimo asikho ekulawuleni kwakho.
Bheka ifoni yakhe: lapho uzothola impendulo kumbuzo othakazelisayo
Njengoba indoda kufanele ikhulume nomthandi wakhe omusha, kungenzeka ukuthi izofihla ifoni kuwe. Futhi lokhu kusho ukuthi awukwazi ukufunda imilayezo yakhe noma ubone izingcingo. Kodwa ngezinye izikhathi kungenzeka. Uma kungaqondakali ukubona ukuthi othandekayo wakho uhlala ebiza noma ebhala u-Vanya umalume, kufanelekile ukucabanga ngakho. Zama ukubuza oshade naye ngaye. Uma, embuzweni wakho mayelana nesihlobo esibi kakhulu, unomuzwa wokuthi indoda enenkontileka isaba, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso sangempela sokuthi umlingani wakho unomthandi.
Umlingani ushintshile kakhulu ikhabethe - kuyadingeka ukukhala i-alamu
Uyazi kanjani ukuthi indoda inenkosikazi? Lapho indoda ithanda owesifazane, uqala ukuyihlolisisa ikhabethe lakhe. Futhi uma ngaphambili umlingani wakho ehamba ngezinyanga eyodwa enyangeni eyodwa, uze uwathathe ekugeza, manje, uzigqoke kanye, uzokucela ukuba uhlanze futhi ubeke le ngubo. Futhi umyeni wakho angayeka ukuthanda izingubo zakho ozithandayo. Isibonelo, i-sweater noma ijajethi, ayigqoka ukuyigqoka ngaphambili, manje ibonakala ibanzi kakhulu noma, ngokuphambene, imincane. Lokhu akusiwo amazwi akhe, cishe, lokhu kungukuthi "umeluleki" omusha, ozama ngazo zonke izindlela zokuzijabulisa.
Ukuphefumula kube mnandi
Uma umyeni enenkosikazi, uzama ukugcoba kaningi. Kuwe, oshade naye akakwazi ukwenza lokhu, ngoba ukholelwa ukuthi uyamthanda nanoma ubani futhi akakwazi ukuthola noma yikuphi kuye. Owesifazane omusha kufanele anqotshwe. Ngenxa yalokhu udinga ukuhamba phambili, enhle, enhle, ehle futhi ehlelekile kahle.
Uma ufuna ukuba ngu-100% uqiniseke ukuthi omunye wesifazane ukhona, zama ukuphula umlenze womyeni wakhe bese umtshela ngakho ngokungaqondile. Indoda enenkosikazi inomsindo kakhulu. Ngemuva kwalokho, ukuya enkundleni entsha engavunyelwe kuyithuluzi elibi kakhulu. Kusobala ukuthi lo wesifazane uphelelwe amandla.
Imisebenzi engaphezulu - imali encane. Esinye isignali ukuthi inkosikazi
Uma owesifazane evela ohlangothini, oshade naye umchitha isikhathi esithile, kodwa futhi nemali. Umkami akakwazi ukunikeza izipho, futhi inkosikazi iyayidinga: i-perfume, amaswidi, utshwala obukhulu, izimbali, izingubo, ubucwebe nokuningi. Konke lokhu kudinga imali kakhulu. Ngakho-ke, uma uqaphela ukuthi umyeni usebenze isikhathi eside, kodwa imali evela emndenini isiphelile, cabanga ngakho bese uzama ukuthola ukuthi iyadliwa yini inkosikazi. Uma wena ngokwakho ungakwazi ukulandelela noma ngesizathu esithile ukwesaba ukwenza lokhu, umphenyi wangasese uzokusiza. Inzuzo manje amahhovisi amaningi anikezela ngamasevisi afanayo.
Ukushisa ngocansi kuyisibonakaliso esiqinisekisayo kakhulu sokuhlukumezeka
Uma umyeni wakho enenkosikazi, ngokuqinisekile ngeke abe yinto encane kakhulu efuna kuwe ngocansi. Amandla emithwalo yemithwalo esondelene nayo ayifanele. Phela, lo wesifazane angaba nobulili kaningi futhi ngisho namadoda amaningana avuke ngosuku olufanayo. Indoda enjengale ingaphezu kwamandla akhe. Ngakho-ke, uma ubona ukuthi oshade naye ulala embhedeni noma unezinwele, kufanelekile ukucabanga ngakho. Ngokusobala, indoda yakho isele yanelisekile ngowesifazane ongaphandle.
Thola ukuthi kukhona inkosikazi futhi ungayibona
Uyazi kanjani ukuthi indoda inenkosikazi? Kukhona okunye okukhethwa kukho. Buka amehlo nesimo sobuso bomngane wakho. Ngamazwi alula, indoda eqale inkosikazi inokubukeka kungekho. Akafuni neze ukuthi kwenzekani endlini yakhe, lo muntu uthanda ukuchitha isikhathi sokungcebeleka nomunye wesifazane. Ngakho-ke, njalo ubonakala ekhona emicabangweni yakhe. Kungenzeka ukuthi ukhumbula nje isikhathi esimnandi esasichithwa ngothando olusha. Lapha kuza okulandelayo: umzimba wakhe ulapha, futhi imicabango isivele ikhona.
Amathiphu omfazi onothando
Ukuze unqume kahle ukuthi umuntu oshade naye unkosikazi, hlala kahle izingubo zakhe, hlola ukubona ukuthi umyeni wakhe usesendleleni yebhizinisi, bheka nge-e-mail yakhe kanye ne-SMS efonini. Zama ukuqapha amakholi angenayo naphumayo. Kwenzeka ukuthi kunokwanele nje ukuba uthole kancane ukukhathazeka inkosikazi bese imenza ahambe. Ungabuza umyeni wakho: "Uthole umuntu?" Umngane wakho wangitshela ... "- lokhu kwanele ukwenza umuntu avume futhi aphenduke.
Kodwa, ngeshwa, akulula ngaso sonke isikhathi. Futhi kufanele uchithe izinzwa eziningi namandla, ngezinye izikhathi ngisho nomphenyi wangasese kuyadingeka ukufakazela ukuthi kukhona omunye wesifazane othembekile. Yiqiniso, ngomzuzu owodwa "ophelele" uzobe uthola ukuthi kukhona inkosikazi. Isibonelo, angakhohlwa ukususa i-SMS yakhe, ephaketheni lakhe, mhlawumbe uzothola isipho nje hhayi kuwe. Ngokuvamile, izinketho zigcwele, kodwa kuthatha isikhathi kuphela, kodwa ufuna ukwazi konke kakade namhlanje.
Indlela yokuthola ukuthi indoda inenkosikazi, manje icacile. Njengoba ungabona, kunezinketho eziningi. Iseluleko sethu kuwe: ubukele ukuziphatha komyeni wakho, usabele ngendlela enomusa ekushintsheni kuye. Futhi akudingeki uzibuze umbuzo: "Uyazi kanjani ukuthi indoda inenkosikazi?" Futhi khumbula ukuthi yonke imfihlo ngokushesha noma kamuva iba sobala.
Phambili Permian "Amkar" Alexander Salugin: Biography futhi umsebenzi endleleni
Botox for eyelashes: ngezibuyekezo nezithombe
Ibhuloho ngaphesheya koMfula Amur e Blagoveshchensk: ukwakhiwa, isithombe